Casharrada casharrada Android talaabo talaabo ah: uga faa'iideyso mobiladaada | Androidsis (Bogga 7)
Citymapper, waa barnaamijka gaadiidka lagama maarmaanka u ah dadka magaalada deggan
Kuwa ku nool magaalo sida Madrid ama Barcelona Citymapper waa barnaamij muhiim u ah inay ku wareegaan oo ay la qabsadaan waqtiyada imaatinka.
Sida looga saaro marinka koontadaada Google barnaamijyada, ciyaaraha, iyo aaladaha ku xiran
Sida loogu daro marin-u-helka tooska ah ee marin kasta oo aan maalin walba ku sameyno Khariidadaha Google
Sidan ayaad ku dari kartaa dariiqa Khariidadaha Google illaa desktop-ka oo markaa si toos ah ayaad u bilaabi kartaa, adoo waqti ku badbaadinaya qaabeynta.
Sida loo joojiyo ogeysiiska ogeysiiska Google Chrome
Haddii aad ku daashay aragtida farriinta haddii aad rabto inaad hesho ogeysiisyada maqaallada cusub mar kasta oo aad booqato degel, markaa waxaan ku tusi doonaa sida loo furo.
Sida loo dejiyo asturnaanta Facebook
5 khiyaanooyin ah si aad ugu habayso asturnaantaada Facebook. Raadi wax intaa ka badan oo ku saabsan sida aan ugu horumarin karno asturnaantayada shabakadda bulshada.
Maxaa la sameeyaa haddii kaarka microSD uusan ku shaqeyn taleefankaaga Android
Maxaa la sameeyaa haddii kaarka microSD uusan ka shaqeyn Android. Raadi wax dheeraad ah oo ku saabsan tallaabooyinka la raaco marka kaarkaaga microSD uusan ka shaqeyneyn taleefankaaga.
5 codsi oo bilaash ah oo ay tahay inaad ku rakibto taleefankaaga Android
5 codsi oo bilaash ah taleefankaaga Android. Soo ogow barnaamijyadan bilaashka ah ee aad si fudud uga soo dejisan karto Bakhaarka Play Store.
Barnaamijyada fariimaha ugu wanaagsan ee loogu talagalay Android
Shanta barnaamij ee ugu wanaagsan ee fariimaha loogu talagalay Android. Raadi wax intaa ka badan oo ku saabsan barnaamijyadan fariimaha la heli karo ee loogu talagalay Android.
Muxuu shahaadada IP67 ama IP68 ka ilaaliyaa?
Maxay yihiin shahaadada IP67 ama IP68 maxayse ka difaacaan. Raadi wax intaa ka badan oo ku saabsan shahaadooyinkan iyo macnahooda.
Qalabka cusub ee Wear OS wuxuu bilaabmayaa inuu gaaro saacadaha ugu horreeya
Smartwatches waxay bilaabayaan inay cusbooneysiiyaan wear OS interface cusub. Raadi wax badan oo ku saabsan cusbooneysiinta soo socota ee saacadaha.
Waa maxay noocyada dareeraha faraha ee ku jira Android
Waa maxay noocyada dareemayaasha faraha ee ku jira Android sideese u shaqeeyaan. Raadi wax badan oo ku saabsan noocyada dareemayaasha faraha iyo sida ay u shaqeeyaan.
Android Oreo horeyba waa nooca saddexaad ee ugu isticmaalka badan
Android Oreo waxaa loo taagay inuu yahay nooca saddexaad ee ugu isticmaalka badan. Soo hel xogta qaybinta cusub ee Android dhammaadka Sebtember.
Sida loo soo dejiyo dhammaan macluumaadka boggaaga Instagram
Sida loo soo dejiyo macluumaadka ay kaydisay Instagram. Raadi wax badan oo ku saabsan xogta uu dalabka caanka ahi adiga kugu saabsan yahay.
Codsiyada ugufiican ee loo habeeyo Android
Shanta codsi ee ugufiican ee shakhsiyeyn kara Android. Raadi wax badan oo ku saabsan barnaamijyadan si aad ugu habeysato dhinacyada taleefankaaga.
Nokia 7 Plus ayaa cusbooneysiinaya Android Pie
Android 9.0 Pie wuxuu bilaabaa inuu yimaado Nokia 7 Plus. Telefoonadu waxay bilaabayaan inay helaan nooca xasilloon ee Android Pie adduunka oo dhan.
Sida loo adeegsado tarjumaanka degdegga ah ee Microsoft ee ku yaal SwiftKey - oo ah kii ugu dambeeyay ee lagu soo kordhiyo barnaamijka kumbuyuutarka
SwiftKey waxay u oggolaaneysaa nooca cusub inay adeegsato turjubaanka Microsoft si uu ugu fuliyo turjumaado isku mar ah luuqad kasta.
Sida loogu daro dariiq websaydh ah desktop-ka Android
Abuurista dariiq loo maro bog internet oo la dhigo miiska kombiyuutarka waa hab aad u fudud oo qaadan doona dhowr ilbiriqsi.
Lacagaha moobaylka ee WhatsApp ayaa dhawaan imaan doona Spain
WhatsApp ayaa soo bandhigi doonta lacag bixinta moobaylka Spain. Raadi wax dheeraad ah oo ku saabsan aaladda cusub ee barnaamijka farriinta uu hadda ku shaqeynayo.
Habka ugu fiican ee loo soo dejiyo liisaska m3u
Sida loo adeegsado makiinada codka ee Google taleefankeena Android
Sida loo adeegsado qorista codka Google ee ku jirta Android. Raadi wax intaa ka badan oo ku saabsan sida loo isticmaalo muuqaalkan Android.
Maxaan ugu isticmaali karnaa Bluetooth taleefoonkeena Android
Maxaa loogu talagalay Bluetooth taleefankeena gacanta. Soo ogow adeegsiga kala duwan ee aan ku siin karno tikniyoolajiyaddan Android.
Sida looga hortago barnaamijyada Android inay cusbooneysiiyaan
Sida loo sameeyo barnaamijyada ku saabsan Android oo aan cusbooneysiin. Raadi wax badan oo ku saabsan sida looga hortago cusbooneysiinta barnaamijyada.
Sannad guurada 20aad ee Google!
Google wuxuu jirsanayaa 20, labaatan sano tan iyo markii uu tusiyaha aasaasiga ah ee webka uu arkay iftiinka ... sida Google isu beddelay iyo sida internetku isu beddelay
3-da Maarso ee Cimilada !!: Top 3 barnaamijyada saadaasha hawada
Sida loogu baahiyo arjiga Dukaanka Play-ka
Sida loogu daabaco arjigaaga Play Store. Soo ogow talaabooyinka si aad ugudajiso arjigaaga Google Play Store.
Maxaa la sameeyaa haddii taleefankaaga Android uusan aqoonsanayn SIM-ga
Tallaabooyinka la raacayo haddii taleefankaaga Android uusan aqoonsanayn SIM-ka. Raadi wax intaa ka badan oo ku saabsan waxa aan sameyneyno haddii SIM-ka aan laga aqoonsaneyn taleefanka.
Ma fiicantahay in la sii daayo RAM-kaaga Android si joogto ah?
Ku sii deynta RAM-ka Android: Muxuu yahay oo macno samaynayaa. Raadi wax intaa ka badan oo ku saabsan sii deynta RAM-ka taleefankaaga Android, taas oo dood badan ka dhex dhalisa dadka isticmaala.
Sida loo calaamadiyo wada sheekaysiga WhatsApp sida loo akhriyo
Ku calaamadeynta wada sheekaysiga sida loogu akhriyo kooxaha WhatsApp waa nidaam naga hor istaagaya in aan luminno waqti qiimo leh oo aan ku dhihi karno waxyaabo kale
Sida looga doorto meel koox ka mid ah Khariidadaha Google si loo qorsheeyo dhacdo
Hadda waxaad qorsheyn kartaa koox aad casho ama qado u aadi doontid shaqada cusub ee xiddigga ee Khariidadaha Google. Sida ugu fudud ee loo wadaago xiriiriye.
Sida loo soo degsado macluumaadka koontadaada WhatsApp
Sida loo soo dejiyo macluumaadka ay WhatsApp kaa hayso. Soo ogow habka aan u soo dejisan karno xogta barnaamijku innaga naga haysto.
Siyaabaha ugu wanaagsan ee lagu banneeyn karo booska taleefankaaga Android
Siyaabaha ugu wanaagsan ee lagu banneeyn karo booska Android. Raadi wax intaa ka badan oo ku saabsan siyaabahan si aad ugu fasaxdo booska taleefankaaga Android.
Android ma soo dallacayso feejignaanta, fiilada ayaa laga jaray
Google Feed wuxuu u beddelay magaceeda Discover wuxuuna ku darayaa astaamo dheeri ah
Google Feed wuxuu bedelay magaciisii ​​isagoo doonaya inuu ka tarjumo isticmaalkiisa inbadan, waxaa hada looyaqaanaa Google Discover wuxuuna keenaa warar badan oo xiiso leh
Qodobkaan waxaan ku tusineynaa sida aan dib ugu dhigi karno ogeysiiska emaylka waqtigiisa iyadoo loo marayo Gmail.
Cadad Faylasha Faylka !!
[APK] Sida loo soo dejisto oo loogu rakibo barnaamijka 'Samsung Experience Launcher' ee Galaxy-kaaga
Hadda waxaad bilaabi kartaa inaad furto qaniinyada nooca 'Android 9.0 Pie' ee Samsung Experience Launcher ee Galaxy-kaaga oo wata Android 8.0 Oreo.
Sida loo ogaado barnaamijyada Android ay cunaan xogta ugu badan
Sidee loo arkaa barnaamijyada isticmaala inta badan xogta ku jirta Android. Raadi wax badan oo ku saabsan habka aan u arki karno una xakameyn karno isticmaalka xogta moobiilka.
Soo dejiso sawirrada Google Pixel 3
Laba toddobaad ka hor Google Pixel 3 iyo 3 XL cusub oo si rasmi ah loo soo bandhigo, waxaan horeyba u haysannay waraaqaha darbiga.
Ka daar oo dhaqaajiso dareeraha faraha mar walba adoo adeegsanaya AdminControl
Haddii aad baahi u qabtid inaad kiciso dareeraha faraha ee mobilkaaga, AdminControl waa barnaamij kuu oggolaanaya inaad sidaas sameyso adigoon lumin diiwaangelinta farahaaga.
Maxay yihiin iyo sida loo isticmaalo taleefannada casriga ah ee loo yaqaan 'Dual SIM'
Waa maxay iyo sida loo isticmaalo taleefanka gacanta ee loo yaqaan 'Dual SIM'. Raadi wax badan oo ku saabsan waxa ay yihiin iyo sida ay u shaqeyso Dual SIM.
Ciyaar Youtube-ka oo shaashaddu ka baxsan tahay
Toyota iyo Google waxay gaareen heshiis ay ku siinayaan Android Auto gawaarida shirkadda Japan
Shirkadda laga leeyahay dalka Japan ee Toyota ayaa ugu dambayntii heshiis la gashay shirkadda Google si ay u siiso Android Auto gawaadhideeda soo socda
Waa maxay sababta taleefankaaga Android uusan si fiican u soo dallacayn?
Sababaha sababta taleefankaaga Android uusan si fiican lacag uga qaadin. Soo ogow sababo kala duwan oo taleefanka uusan inta badan si fiican uga qaadin.
Waxyaabaha Qiyaamaha ah ee la Sameeyo iyo Waxyaabaha aan la Rabin haddii Telefoonkaaga Android uu qoyan yahay
Dos iyo wax ha samayn haddii taleefankaaga Android uu qoyo. Soo ogow talooyinkan si aad uga fogaato dhibaatooyinka taleefanka Android xaaladdan.
Sida loo helo qaabka soo kabashada ee noocyada ku jira Android. Raadi wax badan oo ku saabsan siyaabaha aan ugu helno qaabkan soo saare kasta oo Android ah.
Waa maxay qaabka soo kabashada ee Android iyo maxaa loogu talagalay. Ka ogow wax badan oo ku saabsan korontada in qaabka soo-kabashada ay ku leedahay taleefankeenna Android.
Liiska taleefannada heli doona Android 9.0 Pie
Dhamaan taleefanada u socon doona casriyeynta Android 9.0 Pie. Kala soo bax liiskan taleefannada la xaqiijiyay si aad ugu cusbooneysiiso Android 9
Waa maxay iyo waa maxay faa iidooyinka ay bixiso eSIM?
Waa maxay iyo faa iidooyinka ay eSIM na siiso. Raadi wax intaa ka badan oo ku saabsan waxa ay yihiin iyo faa'iidooyinka ay eSIM-yada dhowaan gaari doona suuqa ay na siin doonaan.
Google Pay waxay tijaabisaa furayaasha QR si lacag loo bixiyo
Google Pay wuxuu ku shaqeyn doonaa dhamaan taleefanada leh NFC ama aan laheyn. Raadi wax intaa ka badan oo ku saabsan tijaabooyinkan 'QR code' ee horey u bilaabmay.
Waraaqda Apex waxay ka timaaddaa abuuraha hal-abuure caanbaxay oo wata 4K gidaarro iyo in ka badan
Waxaad ka haysaa in ka badan 1.000 sawir-gacmeedyo tayo sare leh barnaamijka cusub ee loo yaqaan 'Apex Wallpaper', kaas oo uu soo saaray hal-abuurka 'Apex launcher'.
Sida loo abuuro WebApps-ka Windows Linux ama MAC
Muqaal Video ah oo aan ku barayo sida loo abuuro WebApps-ka Windows Linux iyo MAC iyadoo la rakibayo Google Chrome oo aan loo baahnayn wax kordhin.
Ghostery Privacy Browser waa biraawsar u doodaya asturnaanta isticmaalaha
Haddii aad rabto inaad asturnaantaada ka dhigto markii aad taleefankaaga moobiilka ka dhex isticmaaleysid, isku day Browser Asturnaanta Ghostery.
Renault, Nissan iyo Mitsubishi waxay u qaataan Android gawaaridooda waxayna dhexgalaan barnaamijyada Google
Sanadka 2021-ka waxaa la soo saari doonaa gaarigii ugu horreeyay ee Renault oo ay ku jiri doonaan Android-ka warshadda. Khariidadaha Google, Kaaliyaha iyo barnaamijyo kale oo badan markii ugu horraysay.
Ma maqal Eelo wali?
Eelo, nidaamka hawlgalka ee Gaël Duvan, wuxuu muujinayaa in nidaamka hawlgalka ee ku saleysan Android uu suurtagal yahay iyadoo uusan joogin Google
Dukaameysiga ayaa kusii kordhaya barta Instagram
Instagram waxay soo bandhigaysaa iibsashada qaybaha cusub. Ka ogow wax badan oo ku saabsan isbeddelada uu codsigu soo bandhigo ee ku sharxaya iibsiyada.
Furayaasha sabeynaya waxay ku imaanayaan Gboard beta-kii ugu dambeeyay
Gboard horeyba wuxuu u siiyaa isticmaalaha tan iyo noocii beta ee ugu dambeeyay suurtagalnimada adeegsiga kumbuyuutarka sabbaynaya si loo kordhiyo khibrada isticmaalaha.
Twitter-ka ayaa dib ugu laaban doona sida ay u kala horreeyaan
Twitter-ka ayaa dib u soo bandhigi doona tweets-ka iyaga oo u kala horreeya. Ka ogow waxbadan oo ku saabsan isbedelada lagu soo bandhigo abka caanka ah.
Faa'iidooyinka iyo faa'iido darrooyinka xididka telefoonka aad Android. Raadi wax intaa ka badan oo ku saabsan faa'iidooyinka iyo faa'iido darrooyinka ay hawshani ku siiso.
Waa maxay iyo maxay tahay qaabka HDR ee kamaraddaada?
Waa maxay, waxa loogu talagalay iyo goorta loo isticmaalo qaabka HDR ee kamaraddaada. Soo ogow waxa ay tahay iyo waxtarka ay u leedahay qaabka HDR taleefankayaga Android.
Man ama Vampire waxay ku faani karaan muuqaal farsamo oo weyn si ay u muujiyaan sawiro cajiib ah daqiiqado badan.
Sida loo hagaajiyo xawaaraha shabakada WiFi ee Android
Sida loo hagaajiyo xawaaraha shabakada WiFi ee Android. Soo ogow khiyaanada fudud si aad ugu hagaajiso xawaarahaaga dhowr tallaabo oo keliya.
Sida loogu nadiifiyo emayl ahaan jumlad yar yar
YouTube Kids waxaa lagu xoojiyay aaladaha xannibaadda waalidka
YouTube Kids waxay siiyaan waalidiinta aalado badan oo xannibaya. Ogow wax badan oo ku saabsan isbeddelada lagu sameeyay abka.
Android Pie oo aan soo muuqan bishii Sebtember xogta qaybinta Android
Android Pie lama sii daayo qaybinta bisha Sebtember ee Android. Google waxay daabacdaa xogta qaybinta ee bisha Sebtember iyada oo aan wax isbeddel ah lagu samayn.
Kala fur, waa barnaamij xiiso leh oo loogu abuuro sheekooyinka Instagram qaab fudud
Furo waa barnaamij aad ufiican oo lagu abuuri karo waxyaabaha loogu talagalay Sheekooyinka Instagram. Haddii aad tahay qof jecel Instagram, waa barnaamij lama huraan ah.
Dhammaan wixii ku saabsan WebApps, beddel weyn oo loogu talagalay codsiyada caadiga ah
Spotify seddex laab xaddiga muusikada aan soo dejisan karno
Spotify ayaa noo oggolaan doonta inaan soo dejino saddex-geesoodka heesaha. Raadi wax intaa ka badan oo ku saabsan muuqaalka cusub ee lagu soo bandhigay barnaamijka caanka ah ee iswiidhishka.
Hoyga waxaad ka ilaalin doontaa xogtaada mid qarsoodi ah oo ku gabanaya howlo badan oo barnaamijyo ah
Haddii aadan rabin barnaamij wax ka qaata xogta uu ka helo taleefankaaga Google APIs, Hoyga waa codsi bilaash ah oo bilaash ah oo abuuraya Sandbox.
Nokia 7 Plus wuxuu helayaa Android Pie Beta 4.1 halkii uu ka heli lahaa nooca ugu dambeeya sida la qorsheeyay
21-kii Ogosto, waxaan daabacnay war kaas oo sida ku xusan qaybta Nokia ee Koonfur Afrika, Nokia 7…
Tani waa sida ay tahay in ogeysiisyada Android-ka asaliga ahi ay noqdaan !!
The «Top Picks» waxay yimaadaan Tinder: oo ah liis maalinle ah oo shakhsi ahaaneed oo suurtagal ah «tarash»
Iyada oo loo yaqaan 'Tinder Gold' waxaad gacantaada ku heysan doontaa xulashada ugu sarreysa, maalin kasta, liistada shaqsiyadeed ee cayaaraha suurtagalka ah ee lagu bilaabi karo saaxiibtinimada.
Niagara Launcher, oo ah barnaamij bilow u ah adeegsadayaasha raadinaya wax ka duwan
Haddii aad raadineyso waayo-aragnimo kale markaad ku dhexjirto mobilkaaga, Niagara Launcher waa barnaamij bilow ah oo si fiican u siinaya. Xilligan la joogo gobolka beta.
3 Nooc oo loogu talagalay WhatsApp kaas oo lagu habeeyo barnaamijka
Soo ogow seddexdan nooc ee aad soo dejisan karto si aad u habeysid isticmaalka WhatsApp. Beddel is-dhexgalkooda oo ku hel astaamo dheeri ah iyaga.
App note cajiib ah ee Android !!
Firefox waa la cusbooneysiiyay iyadoo la hagaajinayo nidaamka ogeysiiska
Kaliya maahan Chrome dadka isticmaala Android inay noolaan karaan, in kasta oo xaqiiqda ay tahay in si asal ahaan ah loogu dhex daro dhammaan aaladaha Android ee gaara Nidaamyada soo socda ee ay aasaaseen Hay'adda Mozilla Foundation, Firefox waxay sii wadaa inay hagaajiso asturnaantayada iyadoo ballaarineysa howlaheeda
Android 9.0 Pie hadda wuxuu la jaan qaadayaa Sony DualShock 4 iyo Xbox One gamepad
Android 9.0 Pie hadda wuxuu la jaan qaadayaa DualShock 4 iyo Xbox One gamepad. Faahfaahin intaa ka badan ka ogow talaabadan muhiimka u ah nidaamka qalliinka.
Habka mugdiga ah wuxuu kaloo yimaadaa Google Feed
Quudinta Google sidoo kale waxay heleysaa xaalad mugdi ah. Codsi cusub ayaa ku soo biiraya liiska oo durba wuxuu ka helayaa qaabkan mugdiga ah Google, in kasta oo tijaabooyin lagu jiro.
Nooca xasilloon ee MIUI 10 wuxuu gaarayaa 12 taleefannada Xiaomi
MIUI 10 wuxuu si xasiloon ku yimid 12 taleefannada Xiaomi. Ka ogow wax badan oo ku saabsan cusbooneysiinta lakabka u-habeynta Xiaomi
Sida loo demiyo Kaaliyaha Google ee taleefankaaga
Sida loo demiyo Kaaliyaha Google ee Android. Ma ka daashay Kaaliyaha Google? Waxaan ku baraynaa sida ugu fudud ee loo joojiyo isticmaalka taleefanka.
Sababaha sababta taleefankaaga Android uu u kululaado. Soo ogow qaar ka mid ah sababaha suurtogalka ah ee taleefankaaga Android kuugu kululaanaya
Sida loo keydiyo wadahadalka WhatsApp ee ereyga
Sida loo keydiyo wada hadalka WhatsApp eray. Soo ogow talaabooyinka la raaco si aad uguhesho sheekaysiga qaabkan taleefankaaga.
Sida loo kiciyo badhanka jirka ee Kaaliyaha Google ee taleefankaaga Android
Sida loogu dhaqaajiyo badhanka loogu talagalay Kaaliyaha Google mobilkaaga Android. Soo ogow talaabooyinka aad ku heleyso badhanka jirka ee taleefanka.
[APK] Kameradda Port MIUI
Wixii waayo-aragnimo ah ee ugu wanaagsan ee suurtogalka ah ee YouTube, soo dejiso YouTube Vanced si aad u ilowdo xayeysiisyada oo aad uga ciyaarto gadaal.
[APK] Hadda soo dejiso is-dhexgalka cusub ee 'Netflix' oo leh jihada hoose
Interneedka cusub ee laga yaabo inaad horey ugu haysatay mobiilkaaga ayaa yimid. Haddii kale, rakibi Netflix APK si aad u hesho.
Sida loo kiciyo qaab xaddidan YouTube-ka
Bilihii la soo dhaafay, Raadiyaha weyn ee raadinta ayaa soo bandhigayay dhowr astaamo oo cusub oo ku saabsan codsigiisa calanka, YouTube. Mid ka mid ah kuwa ugu badan Maqaalkan waxaan ku tusineynaa sida aan u dhaqaajin karno habka xaddidan ee YouTube-ka, si looga hortago kuwa yaryar inay helaan waxyaabaha xasaasiga ah.
(La cusbooneysiiyay, fiidiyow lagu daray) Sida loo kiciyo mawduuca mugdiga ah ee YouTube hadda la heli karo
Honor Band 4, shaashadda AMOLED iyo kormeerka heerka garaaca wadnaha oo joogto ah
Waxaan kuu sheegeynaa dhammaan faahfaahinta Kooxda Sharafta 4, oo ah koox caqli badan oo kormeerta garaaca wadnahaaga illaa 6 maalmood oo aan kala go 'lahayn.
Google Play wuxuu bilaabi doonaa barnaamij daacadnimo ah
Google Play wuxuu bilaabi doonaa barnaamijkiisa daacadnimada dhowaan. Raadi wax intaa ka badan oo ku saabsan barnaamijkan goor dhow u imanaya dukaanka barnaamijka.
Sida loo cabiro masaafada saxda ah abka Google Measure ee moobilkaaga Android
Cabbiraaddu waa barnaamij noo oggolaanaya inaan qaadanno barnaamijka kamaraddeenna si aan u cabbirno saxda ah ee walxaha ama masaafada meel kasta oo ay tahay.
Farshaxanka Kartuunka ayaa kuu kaxeynaya iska horimaad aan dhammaad lahayn oo u dhexeeya aadanaha iyo orcs
Haddii aad raadineyso istiraatiijiyad-waqtiga dhabta ah ama ciyaarta RTS, oo leh Farshaxan Cartoon ah waxaad ku jirtaa nasiib. Ciyaar tayo sare leh oo bilaash ah.
Wax yar ka yar usbuuc ka hor, Agoosto 29, saaxiibkay Manu ayaa kugu wargaliyay imaatinka Rootless Pixel Launcher ee Play Store, Google ayaa dib ugalaabtay arjiga Rootless Pixel Launcher dukaanka Play Store maxaa yeelay waxay jabisay tilmaamaha shirkadda .
Waad ku raaxeysan doontaa wargelintaada Android markale.
Sida loo keeno bar-tilmaameedkaaga 'Android navigation' nolosha nolol animations xiiso leh
Stuff waa widget cajiib ah oo bilaash ah in lagu qoro ama liisaska la sameeyo oo leh fursado aan xad lahayn
Haddii aad raadineyso liistada liistada liistada ee xoogga badan oo fudud, Stuff waa mid gaar ah oo aad ku heli karto bilaash.
Kani waa nooca cusub ee Samsung Health: interface cusub oo hadda cabbiraya heerka walaaca
Samsung Health waxay gaareysaa nooca 6.0 si ay isaga dhigto barnaamijka ugu wanaagsan ee hadda jira. Hadda waad cabbiri kartaa walaaca oo waxaad ku raaxeysan kartaa interface cusub.
Sida loo kiciyo habka Incognito ee YouTube-ka loogu talagalay Android
Habka Incognito wuxuu mudnaan u noqday isticmaaleyaal badan sannadihii la soo dhaafay, in kasta oo runti uusan sameynin wax kasta oo ay ballan qaaddo maxaa yeelay had iyo jeer firfircoonida habka habeenka ee YouTube-ka ayaa noo oggolaan doonta inaannaan uga tagin raad-raaca casriga ah ee raadinta aan sameyno.
Android Oreo wuxuu gaarayaa saamiga suuqa ee 14,6% bisha Ogosto
Android Oreo wuxuu ku jiraa kaalinta afaraad ee ugu isticmaalka badan. Raadi wax badan oo ku saabsan tirooyinka qaybinta cusub ee noocyada kala duwan ee Android.
Nova Video Player, oo ah fiidiyoow furan oo fiidiyoow ah oo loogu talagalay taleefankaaga ama TV-ga Android
Nova Video Player waa il furan oo waxay bixisaa taxaddarro wanaagsan oo taxane ah si loogu beddelo VLC Player caan ah.
Kaaliyaha Google wuxuu awoodaa inuu fahmo laba luuqadood isla waqti isku mid ah
Kaaliyaha Google wuxuu horey u fahmay laba luuqadood isku mar. Raadi wax dheeraad ah oo ku saabsan tikniyoolajiyadda cusub ee saaxirahu hadda adeegsado.
Rootless Pixel Launcher wuxuu si fudud ugu saxan yahay nooca asalka ah ee Google Pixel launcher. Hadda qof kasta oo wata Android 5.0 ama ka sareeya.
Facebook Watch ayaa si rasmi ah u gaadhay Spain
Facebook Watch ayaa horeyba looga heli jiray Spain. Soo hel adeegga fiidiyowga cusub ee ku dhex jira shabakadda bulshada ee ugu caansan.
Xaaladda mugdiga ayaa ku soo socota barnaamijka taleefanka ee Google
Barnaamijka taleefanka Google wuxuu heli doonaa qaab mugdi ah. Raadi wax ku saabsan arjiga cusub ee ku biirista qaabka mugdiga ah ee dhowaan soo socda.
Google for Jobs ayaa laga bilaabay 3 bilood ka hor Spain waxayna siinaysaa natiijo aad u wanaagsan kuwa doonaya inay soo galaan suuqa shaqada.
Telegram 4.91: Hagaajinta baasaboorka iyo ogeysiisyo wanaagsan
Telegram waxaa lagu cusbooneysiiyaa hagaajinta Baasaboorka iyo ogeysiisyada. Soo ogow isbeddelada nooca cusub ee arjiga fariinta.
Fariimaha Android waxay soo bandhigayaan dulucda madoow ee barnaamijka
Farriimaha Android waa la cusbooneysiiyaa iyadoo la soo bandhigayo qaab mugdi ah. Ka ogow qaabka mugdiga ah ee ku yimaada arjiga farriinta.
PayPal waxay cusbooneysiisaa naqshadeynta codsigeeda
PayPal waxay soo bandhigi doontaa naqshad cusub toddobaadyada soo socda. Raadi wax intaa ka badan oo ku saabsan isbeddelada ay soo bandhigeyso dalab bixinta.
Siyaabaha looga tirtiro barnaamijka ku saabsan Android
Afar siyaabood oo looga tirtiro barnaamijyada ku saabsan Android. Soo ogow siyaabahan aan uga saari karno codsi taleefankeena.
Dhamaan siyaabaha lagu ogaado IMEI ee taleefankaaga Android
Afar siyaabood oo lagu ogaado lambarka IMEI ee taleefankaaga Android. Soo ogow siyaabahan si aad u ogaato waxa lambarka IMEI ee qalabkaaga Android yahay.
Gmail for Android waxay kuu ogolaaneysaa inaad tirtirto fariimaha aad dirtay
Gmail for Android waxay kuu ogolaaneysaa inaad tirtirto dirista fariimaha. Raadi wax intaa ka badan oo ku saabsan muuqaalka cusub ee lagu soo bandhigay barnaamijka.
Si la yaab leh, gReader ayaa laga waayey Google Play Store. Waxaan ku tusineynaa sida loo soo dejisto akhristaha RSS markale.
Xusuus-qorrada adag ee Microsoft ay ku soo bandhigeyso sannadkan Android
Microsoft ayaa sii deyn doonta Sticky Notes for Android sanadkan. Raadi wax intaa ka badan oo ku saabsan sii deynta barnaamijka Notes-ka ee 'Android'.
Snapchat ayaa soo bandhigi doonta nooc cusub oo barnaamijkeeda ah oo loogu talagalay Android
Nooc cusub oo ah 'Snapchat' ayaa dhowaan iman doona Android. Raadi wax intaa ka badan oo ku saabsan nooca cusub ee barnaamijka dhowaan soo socda.
Haddii aad tahay taageere jir Sim City, Pocket City waa bedelka ugu fiican ee aad hadda ka heli doonto Android. Si fudud aad u fiican.
Google wuxuu ka shaqeeyaa taageerada qalabka gargaarka maqalka ee Android
Google wuxuu soo bandhigayaa taageerada qalabka gargaarka maqalka ee ku habboon Android. Wax badan ka ogow nidaamkan cusub ee ay soo saartay shirkadda.
Barnaamijyada ugu wanaagsan Android ee muusikiistayaasha
Shanta barnaamij ee ugu wanaagsan Android ee muusikiisteyaasha. Soo ogow xulitaankan barnaamijyada aad ku baran karto muusikada.
Android 9.0 Pie wuxuu yeelan doonaa nooca Go-dhamaadka-hoose
Android 9.0 Pie ayaa sidoo kale lagu sii deyn doonaa qaabka Android Go. Wax badan ka ogow nooca cusub ee miisaanka culus ee nidaamka hawlgalka.
Android 9.0 Pie ayaa ka xakameeya barnaamijyada duubista wicitaanada. Raadi wax badan oo ku saabsan go'aanka nooca cusub ee nidaamka qalliinka.
Google si uu u xaliyo Pixel XL arrimaha amarka degdegga ah dhakhsaha badan
Google ayaa dhawaan siineysa xalka kuleylka degdega ah ee Pixel XL. Raadi wax badan oo ku saabsan bayaanka shirkadda ka shaqeyneysa xalka
Twitter Lite wuxuu ku sii fidayaa 21 dal oo cusub oo leh astaamo cusub. Ka ogow wax badan oo ku saabsan horumarka barnaamijka Lite ee suuqa.
Barnaamijka Taleefanka Google ayaa lagu cusbooneysiiyay Qalabka Naqshadeynta
Google Phone waxaa lagu cusbooneysiiyay Qalabka Naqshadeynta qaabkiisa. Raadi wax badan oo ku saabsan cusbooneysiinta barnaamijka taleefanka.
Barnaamijyada ugu wanaagsan ee lagu xakameeyo wicitaanada ku saabsan Android
Afarta codsi ee ugufiican ee lagu xakameeyo wicitaanada ku saabsan Android. Raadi wax intaa ka badan oo ku saabsan barnaamijyadan laga heli karo Play Store.
Sawirada Google ayaa soo bandhigi doona 3D tafatirka sawirka
Sawirrada Google ayaa kuu oggolaanaya inaad ku sawirto sawirrada 3D. Raadi wax badan oo ku saabsan astaamaha cusub ee imanaya abka caanka ah ee Android.